ITIL Toerana Fampivoarana Fanohanana ny Fampiofanana Manohy ny Fampivoarana Mitohy - ITS
ITIL v3 Intermediate CSI (Fanatsarana ny fanompoana foana)
ITIL v3 Intermediate CSI (Fanohanana ny Fanohanana ny Fanompoana) ao gurgaon
ITIL v3 Intermediate CSI (Fanatsarana ny fanompoana momba ny fanompoana) ao Gurgaon
Ivon-toerana momba ny ITIL v3 Intermediate CSI (Fanamafisana ny fanompoana foana) ao gurgaon
ITIL v3 Intermediate CSI (Fanatsarana ny fanompoana foana) any Gurgaon
ITIL v3 Intermediate CSI (Fanamafisana ny fampandrosoana maharitra) ao amin'ny gurgaon
ITIL v3 Intermediate CSI (Fivoahana Fanohanana ny Fanompoana) ao Gurgaon
Ny tsara indrindra ny ITIL v3 Intermediate CSI (Fanohanana ny Fanohanana ny Fanompoana) ao amin'ny Internet
ITIL v3 Intermediate CSI (Fampiofanana ny Fanohanana ny Fanompoana)
TETIK'ASA fampiofanana amin'ny fampandrosoana maharitra sy maharitra
ITIL Fandrosoana fampandrosoana fampandrosoana maharitra tsy tapaka
Ity kalitao ity dia manolotra fomba fijery feno momba ny CSI, anisan'izany ireo hetsika rehetra mifandraika amin'izany: ny mampifanaraka sy manavao ny tolotra IT amin'ny fanovana ny filan'ny orinasa amin'ny alalan'ny famantarana sy fampandehanana ny fanatsarana ny tolotra IT izay manohana ny raharaham-barotra. Ity kalitao ity dia manamarina ny fanatsarana ny asa raha manohana ny fomba fitantanana ny Life Cycle amin'ny alalan'ny Strategy Service, ny Design, ny Tetezamita sy ny Asa Fanompoana. Fepetra ankatoavina ITIL dia afaka amin'ny olona rehetra nandany ny fanadinana ITIL Foundation. Manana rafitra môtera miaraka amin'ny modely tsirairay izay manome lohahevitra hafa IT Service Management. Afaka maka vitsy na mihoatra ny fepetra mahazatra araka izay ilainao ianao. Ny modely afovoan-dàlana dia miditra amin'ny antsipiriany kokoa noho ny mari-pankasitrahana ny Fondation, ary manome mari-pankasitrahana avy amin'ny indostria. Ny mari-pankasitrahana ITIL Intermediate dia zaraina ho sokajy roa -Lifecycle ServicearyAsa fanompoana. Ny sasany mety haniry hifantoka amin'ny karazana modules, fa afaka misafidy ny hifidy môdôla avy amin'ny tambajotra Lifecycle and Service Capability mba hampifandraisana ny fahaiza-manaon'ny fitantanana sy ny teknika. Ny tanjona dia ny hampahafantarinao mialoha ny foto-kevitra fototra ao amin'ny IT ary ny traikefa iainan'ny traikefa roa taona izay miasa ao amin'ny IT Service Management dia alohan'ny hanatanterahana ireo modely amin'ny ITIL Intermediary.
Ny tolotra momba ny fiainana Lifecycle dia mifantoka amin'ny fomba fanao ITIL® ao anatin'ny tontolon'ny fiainana Lifecycle. Ny fifantohana voalohany dia ny Lifecycle ihany, ary koa ny fizotrany sy ny fampiharana ampiasaina ao anatiny.
Ny tolotra Fanamorana ny asa fanompoana dia ho an'ireo izay maniry ny hahatakatra ny fahatakarana lalina momba ny drafitra sy ny andraikitry ITIL® manokana. Ny laharam-pahamehana voalohany dia ny hetsika amin'ny dingana, ny famonoana ny fampiasana ary ny fampiasana mandritra ny Lifecycle Service IT.
Mpihaino ho an'nyFepetra fampitomboana fampandrosoana maharitra tsy tapaka
Lehiben'ny mpiandraiki-draharaha (CIOs)
Ireo manampahefana ambony ao amin'ny Teknolojia (CTO)
Ireo mpifindra monina maniry ny hampiofana sy handinika ny momba izany fepetra izany dia tsy maintsy mihazona ny Certificate ITIL Foundation ao amin'ny IT Service Management izay tsy maintsy aseho ho porofo fanadihadiana mba hahazoana fidirana
Ireo mpifaninana izay mihazona ireto fepetra ITIL manaraka ireto dia azo ekena ihany koa, ary misy porofo mitovy amin'izany:
• Ao aloha Fondation ITIL (V2) plus Foundation Bridge
• Famerenana ny mari-pahaizana ITIL momba ny fitantanana ny serivisy momba ny serivisy (azo tanterahina amin'ny alàlan'ny mpitantana ny serivisy na mpanelanelana)
Fampidirana amin'ny CSI
CSI fomba sy teknika
Hevitra momba ny teknolojia
Fanatanterahana ny CSI
Hery, fototry ny fahombiazana ary loza
Fampiofanana any am-pianarana Gurgaon 2 Days Enroll Now
TETIK'ASA TETIKASA ITILY ITIL (ST - 18T August 2018)
Innovative Technology Solutions dia mitarika andro fanofanana 2 androany amin'ny fivoaran'ny serivisy ITIL amin'ny 18th August 2018 hatramin'ny 19th August 2018.
Hitady bebe kokoa »
Tetikady fampandehanana serivisy ITIL (SS - 19 ny volana aogositra 2018)
Innovative Technology Solutions dia mitarika ny fampiofanana andro 2 momba ny tetik'asa momba ny tolotrasa serivisy ITIL amin'ny 19th August 2018.
Fandraisana an-tserasera amin'ny fampandrosoana maharitra tsy tapaka (CSI - 22nd septambra 2018)
Innovative Technology Solutions dia mitarika andro fampiofanana 2 amin'ny fampivoarana ny serivisy fampandrosoana maharitra tsy tapaka avy amin'ny 22nd Septambra 2018 hatramin'ny 23rd Septambra 2018
Isan'ny fanontaniana: 8 Fanontaniana isaky ny taratasy
Duration: 90 minitra ho an'ireo kandidà tsirairay avy amin'ny fiteny tsirairay avy
Passing Score: Marika 28 notakiana (avy amin'ny 40 misy) - 70%
Fitaovana test: Safidy maro
Raha mila fanampim-panazavana bebe kokoa dia mifandraisa aminay.